आउने साता हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन् : प्रधानमन्त्री [सम्बोधनको पूर्ण पाठसहित] | Jwala Sandesh
आउने साता हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन् : प्रधानमन्त्री [सम्बोधनको पूर्ण पाठसहित]
| प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र २५, २०७६ ::: 164 पटक पढिएको |
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका सम्बन्धमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी २ साता संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको बताउँदै सजगता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
कोभिड–१९ अथवा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले समग्र कामको अगुवाइ गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त, आम जनसमुदाय, राजनीतिककर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संयुक्त ‘कमाण्ड’को रुपमा ‘कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)’ स्थापना गरिएको छ। यसले युद्धस्तरमा कामको समन्वय, निर्देशन र सम्पादन गर्छ। पहिचान गर्ने, परीक्षण गर्ने र उपचार गर्ने सबै कामलाई समन्वयात्मक ढंगले सम्पादन गर्न यसका ४ संरचना (अप्स) खडा गरिएको छ। बिरामी ओसारपसार (पिआरटी) को उपयुक्त व्यवस्था गरिएको छ।
सिसिएमसी, हामी सबैको साझेदारीमा सञ्चालन हुने संरचना हो। .मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा प्रदेश तहमा र स्थानीय तहको वडास्तरसम्मै यस संरचनाको सञ्जाल निर्माण गरिएको छ। स्थानीय तहका वडास्तरसम्म वडा अध्यक्षको संयोजनमा हुने संयन्त्रले आफ्नो वडामा सरकारद्वारा घोषित राहत वितरण गर्नेछ। बिरामी छन्/छैनन्, औषधि–उपचार पाए/पाएनन्, बेरोजगार विपन्नहरूले खान पाए/पाएनन् ? त्यसको अनुगमन तथा व्यवस्थापन समेत गर्ने छ।
यस अवधिमा सातै प्रदेशबाट पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पिसिआर) प्रविधिबाट परीक्षण शुरु गरिएको छ। हिजोसम्म १ हजार ८ सय ९० जनाको परीक्षण गरिसकिएको छ। सातै प्रदेशका १० परीक्षण केन्द्रबाट परीक्षणलाई तीव्रता दिनुका साथै संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा द्रूत परीक्षण (र्यापिड डिटेक्सन टेस्ट–आरडिटी) विधि मार्फत् हजारौंको नमूना परीक्षणको तयारी अगाडि बढाइएको छ। सातै प्रदेशमा, उपचारमा आवश्यक पर्ने पर्सनल प्रोटेक्टीभ इक्वीपमेण्ट (पीपीई) पूरा सेट– १ हजार ४८ थान, गाउन– ११ हजार ८ सय १९ थान, एन ९५ मास्क– ४ हजार ३४५ थान, मास्क– ५ लाख ६५ हजार २६१ थान सहित आवश्यक विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। भेण्टिलेटर सहित अपुग स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको थप प्रबन्ध गरिँदै छ।
विश्वव्यापी रुपमा संक्रमण फैलिँदै जाँदा विदेशमा रहनुभएका कतिपय नेपालीहरूमा पनि संक्रमण देखा परेको छ। केहीको दुःखद निधन समेत भएको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षालाई लिएर, रोजगारी अथवा पढाइलाई लिएर र समग्र भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ। संकटको यस घडीमा हाम्रो सहानुभूति, साथ र सद्भाव उहाँहरूप्रति छ। हाम्रा दूतावास र मिशनहरू प्रवासी र गैर आवासीय नेपालीहरूका समस्या समाधानमा क्रियाशील छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ लगायत सामुदायिक संस्थाहरूले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको स्थितिका बारेमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले नेपाली दूतावासहरू मार्फत जानकारी लिइरहनु भएको छ। नेपाली श्रमिक बहुल रहेका विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूसंग मैले टेलिफोन संवाद सुरु गरेको छु। परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ। मेरो .आग्रह छ– संकटको वर्तमान घडीमा जो जहाँ छौँ, त्यहीँ सुरक्षित रहौँ। संकटका काला बादल अवश्य हटेर जानेछन्।
आउने २ साता सायद हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन्। यो अवधि कोरोनाको लक्षण प्रकट हुने अवधि मात्रै होइन, समुदायमा फैलिने उच्च जोखिमको अवधि पनि हो। त्यसैले महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन हाम्रा सारा प्रयास केन्द्रित गरिने छ। यसै हप्ताबाट प्रयोगमा ल्याइएको र्यापिड डिटेक्सन टेस्ट किटले समुदायमा संक्रमणको स्थिति पहिचान गर्न सघाउने विश्वास गरेका छौँ। यस परीक्षण मार्फत् संभावित संक्रमितको स्क्रीनिङ्ग गर्ने र दोहोरो परीक्षणबाट संक्रमित भए/नभएको सुनिश्चित गरिनेछ। समुदाय स्तरको परीक्षणको लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र सिसिएमसीले संभावित जोखिम रहेका जिल्ला र क्षेत्र तय गरी जनशक्ति परिचालन गरिसकेको छ। थप सुनिश्चितताको लागि क्वारेण्टाइनमा तोकिएको अवधि पूरा गरेकाहरूको समेत परीक्षण गरिने छ। यसका लागि यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।
महामारी विरुद्धको यो युद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको नेतृत्वमा लडिने विशेष प्रकृतिको लडाइँ हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। आजसम्मको तपाईहरूको भूमिकाले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकलाई राम्रो सफलता मिलिरहेको छ। अबको लडाईँको जीत, तपाईहरूको हौसला, विशेषज्ञता र कर्तव्यनिष्ठतामा अडेको छ। तपाईहरूको आँटको आधारमा नै सरकारले कुनै पनि कदम दृढताका साथ चाल्न सक्छ। यसैलाई ध्यानमा राखी उपाचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मी सरह नै संरक्षण गर्ने निर्णय सरकारले यस अघि नै गरिसकेको छ। राहत तथा सुविधाको हकमा उपचारको पहिलो घेरामा रहनेहरूलाई शतप्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो घेरामा रहनेलाई पचहत्तर र पचास प्रतिशत भत्ता यसअघि नै घोषणा गरिसकिएको छ। आवश्यक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित २५ लाख बराबरको बीमाको व्यवस्था पनि सरकारले तपाईहरूको समग्र सुरक्षाका लागि गरेको छ। चिकित्सक टिमसँगै अग्रभागमा रही काम गरिरहेका सबै सुरक्षा निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, ड्राइभर, हेल्पर, सफाई कर्मचारी लगायत कोरोना भाइरसका विरुद्धको उपचारमा संलग्न सबै श्रमिकहरूको भूमिका चिकित्सकीय टीमका सदस्य सरह नै महत्वपूर्ण हुने हुँदा सोही सरह भत्ता/बीमा सहित सरकारले तपाईहरूको समग्र सुरक्षाको बन्दोवस्त गर्छ। यस अभियानमा परिचालन हुने समुदायमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई रु. १ हजार ५ सय भत्ताको थप व्यवस्था गरिएको छ।
संकटको यस घडीमा हामी कहाँ उभिएका थियौँ, हाम्रो ध्यान केमा थियो र हामीले के भूमिका खेलेका थियाँै भन्ने मूल्याङ्कन इतिहासले अवश्य गर्ने नै छ। व्यक्तिको स्मृति छोटो र कमजोर हुन सक्छ, तर इतिहास भने यस मामलामा निर्मम हुन्छ। मेरो आग्रह छ– मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको यस संकटसँग जुझिरहेको बेला हाम्रो ध्यान यसै लडाइँमा एकाग्र गरौँ। अरु छलफल र कामहरू त स्थिति सामान्य बनेपछि गर्न सकिन्छ नै !